Realme – Angel Mobile
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့အတိုင်း realme ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် AIoT ထုတ်ကုန်များကို ANGEL Mobileမှာ ၀ယျယူရရှိနိုငျပါပွီ
နေ့စဉ်ဘ၀မှာ အမြဲ Smart ဖြစ်စေဖို့
Smart Device တွေကို
ANGEL Smart Card
realme ရဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် အရည်အသွေးမြင့် AIoT ထုတ်ကုန်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ realme Band မှာ ဘယ်လိုအသုံး၀င်ပြီး…
Posted by realme on Monday, June 22, 2020
realme မှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ realme Watch မှာတော့ ဘယ်လိုစိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းထားလဲဆိုတာကို…
Posted by realme on Thursday, June 25, 2020
realme Buds Air Neo49900Ks
realme မှ အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် realme Buds Air Neo လေးမှာတော့ ဘယ်လိုစိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတဲ့…
Posted by realme on Tuesday, June 23, 2020
#realmeAIoT #TimetobeSmarter #DaretoLeap
Phone no.:09790149522, 09766616617
48MP Quad Camera ပါဝင်တဲ့ realme 5s လေးရဲ့ နောက်ကျောဘက်အခြမ်းမှာ အသုံးပြုပေးထားတဲ့ Nano Holographic နည်းပညာနဲ့ Red Crystal အရောင်အသစ် နဲ့ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်လို့ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတဲ့သင့်ကို လူအများကြားမှာ ပိုမိုပေါ်လွှင်ထင်ရှားနေစေမှာပါ။
❤️ realme 5s 48MPQuadCameraPowerHero (RAM 4GB + 128GB ROM) = 299,900Ks ❤️
လာမည့် January (1) ရက်နေ့မှာ စတင်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
#Realme5s #48MPQuadCameraPowerHero #DareToLeap
ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ နောက်ကျောဘက်က Sun rise ဒီဇိုင်းအပြင် ဆန်းပြားတဲ့ အထိအတွေ့လေးကို ခံစားရတဲ့ Texture လေးတွေပါဝင်လာတဲ့ realme 5i QuadCameraBatteryKing လေးကို ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ ပင်လယ်ပြာရောင် Aqua Blue ကြောင့် ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုတဲ့သင့်ကို လူအများကြားထဲ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေစေမှာပါ။
realme 5i QuadCameraBatteryKing (RAM 4GB + 64GB ROM) = 229,900Ks
ANGEL Mobileတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
#realme5i #QuadCameraBatteryKing #DaretoLeap
48MP နောက်ကျောဘက် ကင်မရာ (၄) လုံးပါဝင်တဲ့ realme 5s 48MPQuadCameraPowerHero လေးရဲ့ ဘူးထဲမှာ ဘာတွေ ပါဝင်လာမှာလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားမျှဝေပေးပါဦးနော်။
realme Buds Wireless လေး သုံးနေတဲ့ R-Fans တွေ ရှိကြလား?
ဒီတစ်ခါမှတော့ အရမ်းရိုးရှင်းပြီး မှတ်ရတာလည်း လွယ်ကူတဲ့ realme Buds Wireless လေးရဲ့ Control buttons လေးတွေရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်။
realme Buds Wirelss လေးမှာ အသံကျယ်ပေးမယ့် volume up (+) button လေးရယ်၊ အလယ်က (R) Logo လေးရယ် နောက်ပြီး အသံတိုးပေးဖို့ volume down (-) button လေးရယ် ခလုပ်လေး (၃) ခုပဲ ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(R) Logo လေးကို (၃) စက္ကန့်လောက် နည်းနည်းကြာကြာဖိထားရင် (Google Assistance) ခေါ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး
(R) Logo လေးကို (၂) ချက် ဆက်တိုက် နိုပ်ပေးလိုက်ရင် (Next) သီချင်းကျော်ပေးမှာပါ။
(R) Logo လေးကို (၂) ချက် ဆက်တိုက် နိုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ (Previous) အရင်သီချင်းကိုပြန်ခေါ်ပေးမှာပါ။
💛realme Buds Wireless = 40,000Ks💛
#RealmeBudsWireless #RealBassUnwire #DareToLeap
Leap to QuadCamera ဆိုတဲ့အတိုင်း camera (၄) လုံး တွဲဖက်ပါဝင်လာပြီး ရိုက်ကူးမှု အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ သင့်အတွက် ယူဆောင်လာပေးမယ့် realme5မှာပါဝင်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
realme5QuadCameraPowerHero
realme5(RAM 3GB + 32GB ROM) = 219,900Ks (Promo)
realme5(RAM 3GB + 64GB ROM) = 249,900Ks
realme5(RAM 4GB + 128GB ROM) = 279,900Ks
ANGEL Smart Card နဲ့ဖြစ်စေ၊ ANGEL Piti Card နဲ့ ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်စေ ၀ယ်ယူအားပေးရင်း
point မှတ်များများ စုနိုင်ပါပြီ💁
#Realme5 #QuadCameraPowerHero #DareToLeap
ပျော်စရာတွေများတဲ့ လမြတ် တန်ဆောင်တိုင်ကာလလေးမှာ အားလုံးအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ မျှဝေပေးဖို့အတွက် realme5QuadCameraPowerHero နဲ့ realme3နှင်းစက်ပုံစံမျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားသောဘက်ထရီ၊ အရောင်ပြေးဒီဇိုင်း တို့ကို အရမ်းတန်တဲ့ အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်လို့ အခုပဲ ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်။
💛 realme5QuadCameraPowerHero 💛
realme5(RAM 3GB + 32GB ROM) = 219,900Ks
💛 realme3နှင်းစက်ပုံစံမျက်နှာပြင်၊ ကြီးမားသောဘက်ထရီ၊ အရောင်ပြေးဒီဇိုင်း 💛
realme3(3GB RAM + 32GB ROM) = 199,900Ks
realme3(4GB RAM + 64GB ROM) = 239,900Ks Angel Mobileတွင် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါပြီ။